कारोबार र नेप्सेमा बढोत्तरीको सन्देश
सेयर बजार एकाएक उकालो लागेको छ । अघिल्लो साता सेयरमा छाल आउँदा लगानीकर्तामा एकाएक उत्साह बढेको देखिन्छ । कारोबार रकम र नेप्से दुवैमा बढोत्तरी किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरैसँग छैन । अघिल्लो साता मात्र नेप्सेको कारोबारमा झण्डै २२२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने नेप्से १०३ अङ्कको वृद्धिसहित एक हजार ४८६ को विन्दु नजिक आएको देखिन्छ । नेप्सेले एकपटक एक हजार पाँच सयको विन्दुलाई पार गरेर नै हालको अवस्थामा आएको हो । साताको पहिलो दिन पनि नेप्से एक हजार पाँच सयको विन्दुलाई पार गर्दै कारोबार गरिरहेको छ ।
सेयर बजार भनेको नै हल्लाको बजार । अझ नेपाली बजारको सन्दर्भमा त सेयर बजार बढ्दा लगानी गर्ने अझै धेरै हुने अनि घट्दा लगानीकर्ता पनि ह्वात्तै कम हुने कुरा सामान्यझैँ बनेको छ । कतिपय लगानीकर्ता बजार केही बढोस् अनि बजारबाट निस्कौँला भनी मौका कुरेर बसेका थिए । एक हजार दुई सयको नजिक आएर बजार ‘करेक्सन’ हुँदा खरिद गरेकाहरूले नाफा बुकिङ्ग गर्दै बाहिर निस्केको अवस्थाजस्तो देखिन्छ । सेयर बजारमा विक्री गर्ने र खरिद गर्ने दुवैले नाफा कमाउने आशामा नै कारोबार गर्ने हुन् । हाल ठूलो मात्रामा भएको कारोबारलाई हेर्दा कतिपय नाफा बुकिङ गर्दै बाहिरिएको देखिन्छ भने कतिपय घाटा कम गर्दै भए पनि बजारबाट बाहिरिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले बजार अबका दिनमा एकाएक माथि जान्छ भन्ने दह्रो आधार देखिँदैन तर राम्रा कम्पनीमा लामो समयका लागि लगानी गर्नेहरूले भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय चुनावसँगै मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतामा सुधार आउने र बजार सुधारको दिशामा विविध कदम चालिने खरिदकर्ताको विश्वास छ । नेप्सेमा सूचीकृत बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाको नाफामा भएको बढोत्तरीले भविष्यमा नेपाली बजार एकाएक नयाँ उचाइमा पु¥याएर मोटो नाफा कमाउने आशामा नै लगानी भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी बीमा क्षेत्रका कम्पनीको पुँजी वृद्धिको हल्लाले पनि बजार तताएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, चर्को ब्याजदर र सेयर बजारमा थप सेयरको आपूर्तिजस्ता अवरोधहरू थामिएको अवस्थामा बजारमा सुधार आउने निश्चित छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दै बलियो बनेको स्थिति र उनीहरूको कारोबारको दायरामा भएको वृद्धि अनि त्यसले भविष्यमा दिनसक्ने दह्रो प्रतिफललाई हेर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा उचित कम्पनी चयन गरी गरिने लगानीले दीर्घकालमा सही परिणाम दिनसक्नेमा निकै आशावादी हुन सकिन्छ । छोटो अवधिमा नै मोटो लाभ कमाउनेका लागि भने हालको लगानी उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । नेप्से एक हजार ८८१ को विन्दुबाट घटेर एक हजार २१८ को विन्दुसम्म आइपुग्दा जसले आँट गरेर घटेको बजारमा लगानी गरेका थिए उनीहरूले हाल छोटो समयमा नै सन्तोषजनक मुनाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ ।
हाल बजारमा लगानी गर्नेहरूले अझै केही समय बजार माथि नजानुका विविध कारणको पहिचान गर्दै आँट गरेर लामो समयका लागि लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ । सेयरका लागि दिइदै आएको कर्जा मार्जिन लेन्डिङमा बैङ्कहरूले गरेको कडाइ जारी छ । पुरानो सेयर कर्जा नवीकरणमा समस्या आइरहेको छ भने नयाँ कर्जा पाउनु त प्रायः असम्भवझँंै देखिएको छ । अन्य शीर्षकबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्नेले पनि १५ प्रतिशतभन्दा माथिको चर्को ब्याज चुकाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनुले कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्न निकै अप्ठ्यारो परेकोझँै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एकाएक बजार उच्च विन्दुमा पुग्छ र नाफा कमाइन्छ भन्ने सोच गलत सावित पनि हुनसक्छ । तर बजारमा देखिएको बढोत्तरीले लगानीकर्तालाई सेयर खरिदका लागि पुनः एकपटक आकर्षित गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै मुलुकले दिगो निकास पाउने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सुनिश्चितझैँ भएको छ । यसबाट सेयर बजारमा करिब तीन सय अङ्कको बढोत्तरी आएर सकारात्मक सन्देश दिइसकेको छ । इमेलमार्फत पनि लगानीकर्ताले सेयर खरिद विक्रीका लागि दलालकहाँ आदेश दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था र दलाल कम्पनीहरूलाई मोफसलमा शाखा विस्तारका लागि दिइएको दबाबको पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको हो ।
नेपाली सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताबाट दलालहरू समेतको मिलोमतोमा चलखेल भइरहेको छ भन्ने आरोपहरू बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ । त्यसको केही सङ्केतको रूपमा बजारमा कुनै दिन लघुवित्तको सेयरको मूल्यमात्र बढ्ने, कुनै दिन बीमा, कुनै दिन जलविद्युत् समूह त कुनै दिन बैङ्क तथा वित्तीय समूहको सेयरमा मात्र एकाएक छाल आउनुले पनि साना लगानीकर्तालाई आफ्नो मान्यता सही हो कि भन्ने परेको देखिन्छ तर लगानीकर्ता साना होस् वा ठूला, राम्रोसँग बुझेर आफूले लगानी गर्ने कम्पनीका सञ्चालक कस्ता छन्, उनीहरूको ट्याक रिकर्ड कस्तो छ, कम्पनीले भविष्यमा कस्तो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ र कति प्रतिफल दिन्छ, हालको बजार मूल्य र आम्दानीअनुसारको मूल्य आम्दानी अनुपात कति छ ? कम्पनीको सेवा वा व्यापार विस्तारको अवस्था कस्तो छ ? हाल बैङ्कहरूले दिइरहेको ब्याजदर र कम्पनीमा गरिने लगानीमा प्रतिफल कस्तो हुनसक्छ जस्ता विविधि कुराहरूको तुलना गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेयर बजारको राम्रो अध्ययन गर्न नसक्नेका लागि म्युचुअल फण्ड, प्राथमिक सेयर र बैङ्कहरूले हाल दिइरहेको सानदार ब्याज नै उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेकै जोखिम मोल्ने क्षमता हो । आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार नै सेयर बजारमा जोखिम मोल्नेले भविष्यमा बजार बढेका बेला राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भनिन्छ, सेयर बजार भनेकै समग्रमा लोभ र डरको खेल हो । अहिलेको अवस्थामा राम्रो कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्दै जोखिम मोल्न सक्नेले लोभको खेलमा लाग्दै भविष्यमा राम्रै आम्दानी हुन्छ भनेर आशावादी हुँदै लगानी गर्ने हो । मुलुकको राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर तरलता अनि सेयरको बढ्दो आपूर्तिजस्ता समस्यै समस्या देख्नेले सेयर खरिद नगर्ने वा भएको सेयर विक्री गरेर बैङ्कहरूले लामो समयपछि मुद्दती बचतमा दिएको १२ प्रतिशतसम्मको मनग्गे ब्याज खाएर आनन्दले बस्ने हो ।
मुलुकमा राजनीतिक अवस्था सुध्रिएर लगानीका थुप्रै सम्भावना सिर्जना हुने अवस्था हाल खासै देखिँदैन । हो व्यवसायमै व्यस्त रहनेले सम्भावना देखेका होलान् तर नयाँ लगानीकर्ताका लागि भने मुलुकले स्वरोजगारका लागि आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन । बैङ्कहरू घरजग्गा र सवारी साधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा नै आफ्नो लगानी बढाउन व्यस्त रहेकोझैँ देखिन्छ । जलविद्युत्मा गरिने लगानीको प्रतिफल छिटो नआउने र अन्य दीर्घकालीन लगानीको अवस्था नरहनु चिन्ताको विषय हो । बढ्दो पुँजीको अवस्थामा छिटो र धेरै नाफा देखाउने होडमा हाल बैङ्क, वित्तीय संस्था रहेको देखिन्छ । त्यसको परिणाम गलत लगानीले खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयदेखि मुलुकमा सरकार चल्नका लागि चलेको झैँ देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका कुरा भाषणमा मात्र सीमित छ । राम्रो ब्याजदरका कारण बैङ्कमा लगानीकर्ताको थुप्रै पुँजी लगानी भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिका माझ अझै केही समय सेयर बजारमा उत्साहका साथ नयाँ लगानी आउने सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।